2017 Taurus Horoscope - Itaurus
I-Horoscope yeTaurus yoNyaka ka-2017 x
Umoya:Idealism, Uthando, uKhuselo, uBomi.
Iindawo zokundwendwela:EHawaii, eItali, eNew Zealand.
Izinto onokuzifunda:Uhlalutyo lwamaphupha, i-Watercolor Painting, iDiving.
Lo nyaka uya kuqala ngemvakalelo yenkululeko kunye nothando, ekubonelela ngempembelelo enamandla yokuzalisekisa iminqweno yakho kwaye udale indawo enqwenelekayo osoloko ufuna ukufunyanwa kuyo. Ubuhlobo buya kuqhakaza kwaye abanye banokude baguqukele ekubandakanyekeni kwezothando, iibhondi eziya kuthi. Okokugqibela ubomi bonke, okanye uthando lweplatonic ongenakubonakala uluhlisa eMhlabeni. Sele ekupheleni kukaJanuwari ezinye ii-vibes ezingaqhelekanga ziya kulindeleka, kwaye yonke into iya kucima, itshintshe isantya, ihambe isiya kwicala elichaseneyo nelona ulinqwenelayo, ifikelele incopho yayo ngoMatshi kunye noVenus kwintshukumo yokubuyisela umva. Intwasahlobo iya kuphawulwa ngesidingo sokubuya, yenziwe ngawo onke amashishini angagqitywanga, ngakumbi kwiindawo zobomi beemvakalelo kunye nentsebenziswano. Amatyala kuya kufuneka ahlawulwe kwaye imali ayiyi kuza ngeendlela eziqhelekileyo, kodwa oku kuya kuphucula kuphela ukutya kwakho, kwaye kukukhulule ekuzikhathazeni ngayo njengoko uqhele ukwenza.
Njengoko ikwindla isondela, iinzame ozenzayo kunye nokuthozama okukhethileyo kuya kukhanyisa indlela kwaye kukuncede wakhe isiseko esomeleleyo sobudlelwane obutsha. Yiba nokholo ixesha elide njengoko iJupiter ingena kumqondiso weScorpio ngo-Oktobha, ikhanya ngokuqaqambileyo kwindlu yakho yesixhenxe, kwaye izisa uthando olukhulu, umtshato, intsebenziswano enemveliso kunye nobudlelwane nabantu abanethemba, abanomdla, abafundileyo ebomini bakho.
Ukholo lwakho luya kuvavanywa lo gama nje uJupiter ekwindlu yakho yesithandathu kunye nophawu lweLibra, kwaye nangona oku kunokuzisa iingenelo ezithile kwimpilo yakho nakwindlela yokusebenza, kuya kuba nzima ukufumana isikhokelo esilungileyo sokugxila kuyo. zisa imingeni emininzi yeemvakalelo, ubuntununtunu kunye nemibuzo ngeenkolelo. Guqula imbono rhoqo, khangela iimpendulo kubantu abanombono owahlukileyo, kwaye uhlale uvulekele ukuhamba, iimfundiso ezintsha kunye nayo yonke into eyenza ubomi bakho bube nenjongo.
Ikwindla izisa iintsikelelo kwintsimi yobudlelwane bakho, yenza yonke into iqaqambe kwaye ithembise ngakumbi kunokuba ibikhona ixeshana. Lonwabela utshintsho ukuze ube ngcono, utshintsho olukhokelela kuyo yonke into okhe wayiphupha, kwaye ufumanise ukuba ngubani othetha nentliziyo yakho ngokwenyani.
Ngelixa iJupiter kwindlu yakho yesithandathu ithetha ngokhuseleko kunye neziphumo zayo ezintle emzimbeni wakho, isenokuthetha ngeengxaki ongakhange ujongane nazo ekuhambeni kwexesha zikhula. Iimpawu ozifumanayo kwifiziyoloji yakho akufuneki zingahoywa, ngakumbi xa kuziwa kutshintsho lwehomoni kunye nemicimbi yolungelelwaniso jikelele. Zama ukuba ungatyi kakhulu okanye ugqithise nantoni na engavakali ilungile, nokuba amabhongo akho okuzonakalisa athatha indawo. Ziphephe iziyobisi, utywala kunye nenikotini kangangoko unako, kuba ilizwe lakho kunye nesimo sakho sengqondo zinokungcoliswa ziziphumo zazo kwiinyanga ezizayo. Ekupheleni kukaDisemba, kuya kufuneka ukuba ulungele ukuphatha iimeko ezingapheliyo kunye nayo yonke into obungakwazi ukuyisombulula iminyaka. Yiba nomonde kwaye uphumle ngokwaneleyo ukuze ugcine ingqondo nomzimba wakho ucocekile kwaye ungenayo ityhefu kunye noxinzelelo.
Ngelixa uya kuguqukela kwimiba yeemvakalelo kulo nyaka wonke, akuyi kuba kude kube ngukwindla apho uya kufumana ithuba lokuzisombulula ngokwenene. Kuya kuba phantse akunakwenzeka ukufumana indlela elungileyo yokwenza kunye neenjongo zakho, isimilo kunye nesikhokelo sobomi sivavanywa. Kufuneka ufumane injongo kubudlelwane bakho ngamnye. Sebenzisa u-Agasti noSeptemba ukunxibelelana namalungu osapho kunye nabo basondeleyo entliziyweni yakho, malunga namava abuhlungu kunye nemiba oye wayityhalela ecaleni xa ungakulungelanga ukujongana nayo. Ngelixa intwasahlobo iya kukukhuthaza kwaye ikukhumbuze ngokuqhakaza kobomi kunye nothando, akunakukwanela ukwenza iminqweno yakho kunye neenjongo ngeebhondi eziqinileyo kunye neemvakalelo eziqhubekayo zothando. Yenza konke onako ukuze ukonwabele yonke isekhondi yobuhle onayo kwaye ulinde phakathi kuka-Okthobha ukuze uqale nawaphi na amashishini amatsha ngokweemvakalelo, utshate, okanye wenze utshintsho olukhulu kubomi bakho bothando.
Lo ngomnye waloo minyaka xa uya kuxhaswa ngamandla kuyo yonke imizamo yakho yobuchwephesha, okoko nje bezisa inzuzo eyaneleyo kunye nolwazi ngendlela yakho. Nangona intwasahlobo igcinelwe ukulungiswa kunye nayo yonke imicimbi engazange yenziwe kakuhle okokuqala, sele ngo-Epreli uya kubona iimveliso zomboniso wakho womsebenzi onzima kwaye uzuze umbulelo kumandla owafaka kuwo. Ukuthandabuza ngeli xesha kunempilo kwaye uthetha ngomgwebo wakho ongcono, ke unganikezeli kumadabi angaphakathi uzama ukuba nengqiqo endaweni yokulandela hunch yakho. Nje ukuba umamele iimvakalelo zakho kwaye uqale ukujongana nemiba ebhekiselele kwiinjongo zakho zokwenyani, uya kuba nethuba lokwakha intsebenziswano enemveliso kunye nokuphumeza ulwazi lwakho ngeyona ndlela ingcono.
I-Scorpio Iponti Gemini Leo Pisces